कसरी सुरु भयो भोटोजात्रा ? यस्तो छ कथा « News of Nepal
कसरी सुरु भयो भोटोजात्रा ? यस्तो छ कथा
किंवदन्तीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको टौदहमा एक जोडी नाग दम्पती बस्दथे । त्यो नागका राजा कर्कोटक नागको जोडी थियो । एकपटक नागिनीको आँखा बिरामी भयो ।
राजाले नागिनीको आँखा उपचार गराउने वैद्य खोज्ने क्रममा भक्तपुरमा एक जान्ने ज्यापू वैद्य रहेको थाहा पाए । कर्कोटक नाग ज्यापू वैद्यलाई खोज्न गए । नागले ज्यापूलाई नागिनीको आँखा दुखेको बिन्ती बिसाए । ती ज्यापू वैद्यले नागको अनुरोध स्वीकारे । दुवै टौदह पुगे । वैद्यले नागिनीका आँखामा मल्हम बनाएर लगाइदिए । उनको आँखा निको भयो । नागनागिनी ज्यादै खुशी भएर ज्यापू वैद्यलाई अनेक पुरस्कार दिए । सो पुरस्कारमा अनेक किसिमका मणि जडेको झलझल झल्कने भोटो पनि थियो ।
त्यो भोटो लगाएर ज्यापू वैद्य ढल्कँदै हिँड्थे । ज्यापूको त्यति राम्रो भोटो देखेर भूतलाई लोभ लाग्यो । ज्यापूले भोटो फुकालेर आलीमा राखी खेत खन्न थालेपछि भूतले भोटो सुटुक्क चोरेर लग्यो । हस्याङ्फस्याङ गर्दै वैद्य भूतको पछि लागे । उनले भूतलाई समात्न सकेनन् ।
पाटनमा त्यसअघि मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने मात्र चलन थियो । यस समय मच्छिन्द्रनाथको रथ तानेर जावलाखेल ल्याइपु¥याउँदा उपत्यकावासी र भूतप्रेत पनि जात्रा हेर्न आउँथे । त्यो भोटो चोर्ने भूत पनि जात्रामा आउँछ कि भनेर ज्यापू त्यहाँ आइपुगे । नभन्दै झल्झली झल्केको भोटो लगाएर भूत जात्रा हेर्न आएको रहेछ । त्यो भूत झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउँथ्यो । बल्लतल्ल वैद्यले पछाडिबाट भूतका पाखुरामा च्याप्प समाते । उनले भूतसँग आफ्नो भोटो मागे । भूतले दिन मानेन । दुवैका बीच ठूलो झगडा भयो । राजा गुणकामदेव पनि मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गर्न र जात्रा हेर्न त्यहाँ आएका थिए । राजाका भारदारले ती दुवैबीच ठूलो झगडा भएपछि राजाका अगाडि हाजिर गराए । वैद्यले राजासामु ‘महाराज मलाई कर्कोटक नागले दिएको भोटो यसले चोर्‍यो’ भने । भूतले भोटो मकैैबारीमा आफूले पाएको राजासामु बतायो । गुणकामदेव न्यायी र धर्मात्मा राजा भएकाले दुवैसँग प्रमाण मागी निर्णय नहुञ्जेल त्यो भोटो नासोका रुपमा मच्छिन्द्रनाथको पुजारीलाई राख्न अनुरोध गरेको मानिन्छ ।
प्रमाणका लागि ज्यापू वैद्य टौदह किनारमा पुगेर कर्कोट नागलाई भेटे । नागले आफू पनि मान्छेको रुप लिई सेतो लुगा लगाएर मच्छिन्द्रनाथ जात्रामा साक्षी बन्न आउने बताए । “म आउँदा हुरी चल्नेछ, म अरुभन्दा अग्लो पनि देखिने छु”, कर्कोटक नागले भने । त्यस समय जावलाखेलमा मच्छिन्द्रनाथको रथ आइपुगेको तीन दिन भएको थियो । ज्यापू भोटो पाउने आश लिएर बेलैमा जावलाखेल आए ।
लोकेश्वरको रथ ३२ हात ४८ फिट अग्लो हुन्छ । वृष्टिदेवको रथ पुल्चोकको दमकलचोकस्थित जोगाम्बर पीठ र मीननाथको रथ टङ्गालको ज्येष्ठ बहाल परिसरमा बनाउने गरिन्छ । मच्छिन्द्रनाथको रथ राजा बरदेवले बनाउन लगाए भने मीननाथको रथ अंशु बर्माका भाइ राजा बालाचरणको पालादेखि बनाउन शुरु गरिएको थियो । मच्छिन्द्रनाथलाई लोकेश्वर त मीननाथलाई जटाधारी लोकेश्वरका नामले पुकारिन्छ । विसं ६५० मा मच्छिन्द्रनाथसँगै मीननाथको पनि रथ तान्ने प्रचलन अघि बढेको पाटन सुन्धरा निवासी सूर्यमान डङ्गोलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक वर्ष चैतकृष्ण प्रतिपदाका दिन मच्छिन्द्रनाथलाई महास्नान गर्ने परम्परा रहेको छ भने यसैगरी हरेक वर्ष वैशाख कृष्णपक्ष प्रतिपदाका दिनमा मीननाथलाई दिउँसो महास्नान गराइन्छ, मच्छिन्द्रनाथलाई करुणामय भनिन्छ भने मीननाथलाई धर्म र पाप छुट्याउने पितृका राजा भनिनुका साथै धर्मराज वा यमराजका नामले पुकारिन्छ ।”
सत्ययुगमा यमराजले मत्स्य अवतार मीन रुप लिई सुखावती भुवन मत्र्यमण्डलबाट नेपाल आई मीननाथ लोकेश्वर भनी प्रख्यात भएको किंवदन्ती रहेको छ । रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई पाटनको ठूलो उत्सवका रूपमा हिन्दूलगायत बुद्ध धमावलम्बीले मनाउने गर्थे । यो काठमाडौँ उपत्यकाको सबैभन्दा लामो रथजात्रा हो । यो जात्रा हेर्न काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै शहरबाट श्रद्धालु भक्तजन पाटन आउने चलन थियो । मच्छिन्द्रनाथ पूजाका लागि ३१ पनेजु गठन भएका छन् तर भगवान्सहित जोडेर ३२ पानेजु सङ्घ भन्ने गरिन्छ । ती ३१ पानेजुले पालैपालो सहकालका देवताको पूजाआजा र रेखदेख गर्दै आएका पनि छन् । यस वर्ष एक्लो आइमाइले रथ तान्ने र नरिवल खसाल्ने काम आदिसमेत नहुने भएको छ । मच्छिन्द्रनाथलाई छ महिना पाटनको तःबहाल र छ महिना बुङ्मतीमा राख्ने चलन रहँदा यस वर्ष लगभग नौ महिना मच्छिन्द्रनाथ पाटन बसिसक्नुभयो ।
अधिकारीको मर्फिन बजारमा